Palmrest Keyboard ကိုအထက် Casting OEM Semi Solid သေ China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Panel ကို,လူမီနီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Notebook PC ကို Panel ကို,ဖိအားပစ္စည်းများ Casting Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > Precision Mg ကာစ် Die > Palmrest Keyboard ကိုအထက် Casting OEM Semi Solid သေ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲကီးဘုတ်, Palmrest Keyboard ကိုအထက်, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း panel ကို Casting OEM Semi Solid သေ non-ferrous သတ္တုအလွိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ Sub-စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးအရင်းအနှီးနှင့်ပစ္စည်းအထူးကြပ်မတ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ထိုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများ၏အနိမ့်အဆင့်အတိုင်း, foundry စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုဟာမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်မည်, စျေးကွက်ပို အဆင်သင့်။ ၎င်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ချေးများနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများအများအပြားဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်:, အပူလွန်ကျူး, အလင်းအရည်အသွေး, ကောင်းသောမာကျောမှု, အချို့ချေးခုခံနှင့်ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုအစာရှောင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခုခံ, ခုခံဝတ်ဆင်, ကောင်းသောကို attenuation စွမ်းဆောင်မှုနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်လည်နာလန်ထူ; အပြင်, ကမြင့်မားသောအပူနှင့်ကူးမှုဂုဏ်သတ္တိများမရှိသံလိုက်, ကောင်းသောဒိုင်းကာများနှင့် Non-အဆိပ်လက္ခဏာများရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအသစ်ကသတ္တုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏သော့နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်: အကိုပိုမိုပေါ့ပါး SSC / Mg အလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်း; တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းအလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ချ. သေဆုံးအဖြစ်ကျနော်တို့နည်းပညာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လျက်, စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းကြောင်းသစ် "မဂ္ဂနီဆီယမ်စာပေ" ရှေ့ဆက် ထား. , တရုတ်နှင့်ဂျာမနီမှာမှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်။ စက်မှုစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် Zun MEIZUN "မရှိသေးငယ်တဲ့သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေကို လုပ်. , ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်သို့သင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုဖွင့်ဖို့ 100 ခန့်ကလူရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရှိပါတယ်, 101 မဂ္ဂနီဆီယမ် အလွိုင်း rheological သေ-သတ္တုများပုံသွန်း semisolid, ရှိသမျှတင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း semisolid စက် ချ. သေဆုံး, ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုနမူနာထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြီးဆုံးအများစုအဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းသတ္တုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုစက်ရုံများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန, ထိုလိုအပ်ပါတယ် အမိန့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး